आर्थिक अपराध: कसले दियो शर्मालाई मान्छे मार्ने लाइसेन्स ? | Citizen Post News
Mist, Kathmandu, Nepal 190 C
आर्थिक अपराध: कसले दियो शर्मालाई मान्छे मार्ने लाइसेन्स ?
२०७५ साउन १ गते ०९:३९
काठमाडौं । काठमाडौंमा समेत शाखा कार्यालय खोलेर डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीको भर्ना लिइरहेको बिराटनगरको नोवेल मेडिकल कलेज तथा अस्पतालका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माको आर्थिक अपराध अत्यधिक देखिएको छ । नेतालाई पालेको, घुस खुवाएको भरमा आवश्यकताभन्दा बढि भर्ना अनुमति लिएको खुलासा भइसकेको छ । उनले मेडिकल काउन्सिललाई दिएको विवरणका आधारमा नोवेल शिक्षण अस्पतालका ४ सय ५० बेड नै गायब छन् ।
असार ०६७ मा अनुगमन गर्न गएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले नोवेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा ४२० बेड रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यहाँ ६३० बेड थप्ने प्रतिबद्धतापछि शर्माको मेडिकल कलेजलाई एक सय ५० विद्यार्थी भर्नाको अनुमति दिइएको थियो । नोवेलले मेडिकल शिक्षामा प्रति विद्यार्थी ४७ लाख ९० हजार लिने गरिएको छ । यो हिसाबले काउन्सिले दिएको अनुमतिका आधारमा उसले त्यस बर्षमात्र ७२ करोड रकम उठाएको थियो, तर सर्त उसले पुरा गरेको छैन् ।
नौ महिनापछि वैशाख ०६८ मा अनुगमन गर्न गएको काउन्सिलको टोलीले ७२१ बेड पुगेको प्रतिवेदन दिएको थियो । करिब एक वर्षपछि असार ०६९ मा गएको अर्को टोलीले अस्पतालमा नौ सय बेड पुगेको जानकारी दिएको थियो । तर, सात महिनापछि प्रा.डा.विमलकुमार सिन्हाको नेतृत्वमा गएको टोलीले नोवेल मेडिकल कलेजमा ४५० मात्र बेड भेट्टाएको थियो । यस हिसाबले ४५० बेड नभएको मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्नावापत उठाएको रकमले २ सय ५० करोड आर्थिक अपराध गरेको ठहर्छ ।
नोवेलले प्रति विद्यार्थी कम्तिमा ४७ लाख ९० हजार भर्ना शुल्क मात्र लिने गरेको छ । मापदण्ड नपुगे पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न र मेडिकल कलेजको नाममा व्यापार बढाउन यसरी कागजी प्रक्रिया मिलाउने गरिएको स्रोतले जनायो । छानबिन समितिका अनुसार पूर्वाधार र अध्यापक नहुँदानहुँदै पनि जथाभावी बढाएर नोवेल मेडिकल कलेजलाई सिट दिइयो, खाने भाँडो बनाइयो, चिकित्सा शिक्षाको स्तर खसाल्ने काम गरियो, अधिकारको दुरूपयोग गरियो । नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका उच्च तहका नेतासँगको सम्बन्धका कारण प्रतिवेदनमा झूठ उल्लेख गरेर शर्माले आर्थिक अपराध पनि मच्चाएका छन् ।
डाक्टरले दिए सामुहिक राजीनामाः
त्यसो त शर्माको आर्थिक अपराधले चरम सीमा नाघेपछि प्रसुती सेवामा काम गर्ने चार जना मात्रै डाक्टरले सामुहिक राजीनामा दिएपछि नोवेल मेडिकल कलेज बिराटनगरमा सुत्केरी सेवा बन्द गराइएको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत राज्यसँग समन्वय र रकम लिएर सेवा दिनुपर्ने नोवेलले आफुखुसी कार्यक्रम बन्द गरेको हो । सुनसरीको गढि गाउँपालिका ६ की चाँदनी मेहेता अघिल्लो हप्ता नोवेल अस्पतालमा भर्ना भइन । शनिवार बिहान सकुशल नानीलाई जन्म दिएकी मेहेताले सोहिदिन दिउँसो ३ बजे अस्प्तालमा अन्तिम सास फेरिन ।
उपचारमा गम्भिर त्रुटि गरेको भन्दै आफन्त आक्रोसित बने । उनीहरूको चित्त बुुझाउन प्रशासनले ५ लाख क्षतिपूर्ति दिने सहमति त गर्यो तर, उक्त सहमति बमोजिमको रकम भने दिएन । उनको जस्तै घटना भयो धनकुुटा महालक्ष्मी– ४ चानुवाकी निर्मला खड्काको । उनले पनि शुक्रवार छोरीलाइ जन्म दिइन । सामान्य अवस्थामा सुत्केरी भएको खड्काको अकस्मात असामान्य अवस्था आयो भन्दै चिकित्सकले इर्मेजेन्सी अप्रेशन गर्न सुुझाई अप्रेशन थिएटरमा छिराए । तर, निर्मला स्वस्थ भएर फर्किइनन् ।
दुुइ दिनको फरकमा नोवेल अस्पतालमा भएका यि प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस अघि पनि अस्पतालमा सुत्केरी गराउन आएका महिलाको अकालमा ज्यान गएको भन्दै पटक–पटक विवादमा आउने नोवेल अस्पतालले सामान्य क्षतिपूर्ति भराई विवाद तत्कालका लागि साम्य बनाउने प्रयत्न गर्ने गरेको छ । तर, के कारणले विरामीको ज्यान गएको भन्ने बारे गम्भिर बन्ने गरेको छैन् ।
निर्मलाका श्रीमान प्रेम खड्काले चिकित्सकले समयमा नै के भएको भन्ने बारे एकिन जानकारी नदिँदा समस्या बढ्दै गएको र बिरामीको अबस्था सुधार हुनै नसक्ने अवस्थामा पुुगेको गुनासो गरे । ‘सामान्य अवस्थाको बिरामीले मृत्युवरण गर्नुुपर्ला भनेर हामीले सोचेकै थिएनौं’ उनले भने-‘अस्पतालको हेलचेक्राइले नै मेरो श्रीमतीको ज्यान गएको हो ।’
मातृशिशुु विभागमा कार्यरत चार जना चिकित्सकले मंगलवार प्रशासन समक्ष राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूले सुत्केरी गराउन आएका महिलाको ज्यान गएको घटनाले आफुुहरु असुरक्षित हुने गरेको भन्दै मंगलवारदेखि अस्पतालको सेवामा उपस्थित नहुने जानकारी दिएको प्रशासकिय अधिकृत दीपेश राईले बताए । उनले चिकित्सकले दिएको राजिनामालाई गम्भिर रुपमा लिइएको भन्दै स्वीकृत नहुन्जेल चिकित्सकको नाम प्रशासनले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जानकारी दिए ।
राजेन्द्र न्यौपाने यसरी भए सुनिल शर्माः
बाबुआमा, परिवारका केही सदस्य, सहपाठी र छिमेकीबाहेकले अहिले राजेन्द्र न्यौपानेलाई डा.सुनिल शर्माको नामले चिन्दछन् । नोवेल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक, शक्तिकेन्द्रको आडमा मनपरी गर्ने लाइसेन्स पाएको उदण्ड मेडिकल कलेज सञ्चालकका रुपमा देशभरी नै डा. सुनिल शर्माको नाम चर्चित छ । तर उनको असली नाम राजेन्द्र न्यौपाने हो ।
विराटनगरमा नेपाली कांग्रेससँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका शर्माले कोइराला निवासमा पाएको बास नै मेडिकल कलेजमार्फत कमाएको विख्यातको कारण बन्यो । उनले बासमात्र होइन तत्कालिन सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालापुत्री सुजाता कोइरालालाई मोटरसाइकलमा राखेर भारत पुराएवापत ‘स्याव्वासी’ पनि पाए । भयंकर महत्वकांक्षा पालेका शर्माले सुजातालाई गरेको सहयोगको मूल्य नोवेल मेडिकल कलेजको सम्बन्धसँग साटे । गिरीजाले उक्त सम्बन्धन तत्काल दिन लगाए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा सत्ता हातमा लिएपछि राजाको कदमबारे विदेशीसँग कुरा गर्न सुजातालाई स्थलमार्ग हुँदै भारत पुराउन शर्माको सहयोग थियो ।
विराटनगरका डा.ज्ञानेन्द्र गिरी, नवराज पाण्डे, आदित्य खनाल, रविन दाहाललगायतको समूह नोवेल मेडिकल कलेज सञ्चालन तयारीमा थिए । कलेजका लागि भौतिक पूर्वाधार र टिचिङ फ्याकल्टी व्यवस्था गरेपछि उनीहरूले सम्बन्धनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आवेदन दिए । सम्बन्ध नमिलिरहेका बेला शर्मा भेटिए । सम्बन्धन दिलाएवापत ५ प्रतिशत सेयरको बार्गेनिङ गरेका सुनिल शर्मा अहिले त्यसका मालिक बनेका छन् । स्थापनाकालमा डा. गिरी अध्यक्ष रहेको नोवेल अस्पतालमा २८ करोड लगानी थियो ।
मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएपछि शर्माले २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यसका नेतालाई समेत प्रलोभनमा पारेर शर्माले मेडिकल कलेज हडप्ने रणनीति अपनाए । त्यसबेलाका शर्माका एक सहयोगी भन्छन्,‘मास्टर माइन्ड त नभनौं, क्रिमिनल माइन्ड भएका व्यक्ति हुन् । कसलाई कहाँ कसरी सिध्याउने भन्ने उनको बलियो रणनीति हुन्छ ।’ उनका अनुसार महादेवको सेवा गरेवापत रावणले पार्वती मागेजसरी नै मेडिकल कलेज हत्याउन शर्मा सफल भएका हुन् ।
अहिले देखिने विवादहरु साम्य पार्नका लागि पनि उनले शक्तिकेन्द्रको दबाब र भरोसा दुवै हातमा लिएका छन् । कतिपयले नोवेलमा माओवादीको रकम लगानी भएको पनि बताउने गरेका छन् । तत्कालिन माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलमार्फत् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको उपस्थितिमा वर्षमान पुन, सुनील र नोवेलका अन्य साझेदार राखेर दाहाल निवासमा छलफलका लागि विराटनगरबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा एयरपोर्ट छेउबाट २०६४ मंसिर १८ गते डा.गिरी, पाण्डे, आदित्य खनाल, उमेश पाण्डेलाई शर्माले वाइसिएलका तत्कालीन इन्चार्ज चन्द्रबहादुर थापा (सागर) को निर्देशनमा अपहरण गरी काभ्रेको बल्थलीमा पु¥याएर २७ घन्टापछि मुक्त गरे ।
‘नोवेलमा त्यसबेला माओवादीले देखाएको चासोका कारण पनि शर्माले माओवादीको रकम लगानी गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो’, स्रोतले भन्यो,‘नत्र नोवेल मेडिकल कलेजकै विषयमा मात्र माओवादी किन हेडक्वार्टरमा बैठक बस्न तयार भयो ?’ सुरुका लगानीकर्ता डा. गिरी र पाण्डेलाई नोवेलबाट हटाएपछि शर्माले साझेदारका रुपमा विराट अस्पतालका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीलाई भित्राएर ५० प्रतिशत सेयर दिए । पाँच प्रतिशत सेयरबाट नोवेल छिरेका शर्मा २०६५ सम्म ५० प्रतिशत शेयरधनी मात्र होइन, नोवेललाई एकलौटी पकडमा लिन सफल भए । डा. कार्कीसँग उनको साझेदारी लामो समय टिकेन ।
कार्की पनि किक आउट भए । कार्कीले अहिले बिराट मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलाई पर्खिरहेका छन् । बिराट नर्सिङ होम, बिराट हेल्थ कलेज कार्कीले चलाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाका प्रिय भएका कारणले पनि शर्माले गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मोरङ–३ मा टिकट पाएका थिए । कांग्रेस आवरणको राजनीति गरे पनि शर्माको पूर्वमाओवादी नेताहरूसँगको उठबस बलियो रहँदै आएको छ । माओवादी भुमिगत भएको बेला कोइराला र बर्षमान पुनको भेट नयाँ दिल्लीमा गराएको ‘जस’ उनले लिने पनि गरेका छन् । शक्ति केन्द्रको आडमा मेडिकल कलेज हत्याएका शर्माले राम्रो स्वास्थ्य शिक्षा र गतिलो उपचार भने दिन सकेका छैनन् ।
अर्बौको सम्पत्ति भएको नोवेलमा अहिले पनि गलत उपचार गराउने, पीडितलाई धम्क्याउने, प्रशासनको आडमा नियन्त्रणमा राख्न शर्मा माहिर छन् । गएको सातामात्रै नोवेलमा आएका बिरामी मृत्यु भएको विषयमा शर्माले क्षतिपूर्ति दिने कबोल गरे पनि आफन्तलाई धम्क्याएर पठाएको खबर आजको जनप्रहारमा छापिएको छ ।
नयाँ ‘सिल्क रोड’ का लागि चीन र इटालीबीच हस्ताक्षर
२०७५ चैत्र ९ गते २०:३७
'सांसद कोष' दुरुपयोग गरेको भन्दै पूर्व कानुनमन्त्री तामाङ विरुद्ध मुद्दा
२०७५ चैत्र ९ गते १५:४३
हुलाकी सडक: दुई वर्षको म्याद सकियो, सडक अधुरै
२०७५ चैत्र ९ गते १३:४०
बुढेशकालमा 'लभ' र 'प्रविधि अपराध'
२०७५ चैत्र ९ गते १२:४९
बंशज नागरिकता लिने भारतीय नागरिक साह जेल चलान
२०७५ चैत्र ९ गते ०९:०५
२०७५ चैत्र ९ गते ०८:१४
विप्लव माओवादीमा पहिरो, विश्वासिला नेता ओली नै समातिए
२०७५ चैत्र ९ गते ०७:४६
छोरीसँग एसइइ दिँदै गरेकी सांसद चौधरीको विद्यावारिधि गर्ने धोको
२०७५ चैत्र ८ गते १९:२०
प्रधानमन्त्रीद्वारा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आकस्मिक निरीक्षण
२०७५ चैत्र ८ गते १२:४३
१७ दिनपछि अपहरणमुक्त, यसरी समातिए दुई अपहरणकारी
२०७५ चैत्र ८ गते ११:०३